[Zvimwe zvekutengesa sarudzo! ] Ryota Komatsu Tango Quintet +XNUMX (Percussion) | Ota Ward Cultural Promotion Association
[Zvimwe zvekutengesa sarudzo! ]Ryota Komatsu Tango Quintet +XNUMX (mhirizhonga)
Piazzolla zana rechigumi	[Zvimwe zvekutengesa sarudzo! ]Ryota Komatsu Tango Quintet +XNUMX (mhirizhonga)
[Zvimwe zvekutengesa sarudzo! ] Kukanzurwa kwenyika ye emergency, tichatengesa zvimwe zvigaro zvakamiswa.
Kusunungurwa zuva: Gumiguru 2021, 10 (Chishanu) 15: 10-
Chirongwa chakakosha chinogona kungoitwa chete naRyota Komatsu anoziva zvese nezve tango
Libertango Piazzolla Yekutanga Tokyo Premiere!
Vhidhiyo yekubvunzurudza yemutambi Ryota Komatsu yave kuwanikwa pane yepamutemo YouTube!Iwe unogona kuzviona kubva kune inoenderana ruzivo ikholamu pazasi peji.
* Chigaro chimwe chichatengeswa munzvimbo yekugara (kusara mutsara wepamberi nezvimwe zvigaro) pasina kusiya chigaro chimwe kumberi, kumashure, kuruboshwe uye kurudyi.
18:30 kutanga (17:30 yakavhurika)
Piazzolla: Libertango-Piazzolla Yekutanga (1975 Edition) -
Piazzolla: Nguva yechando muBuenos Aires, nezvimwe.
Shinji Tanaka (chibvumirano)
Natsuki Kido (gitare)
Naofumi Satake (mhirizhonga)
Nana & Axel (muenzi mutambi)
Kusunungurwa zuva: Kubvumbi 2021, 9 (Chitatu) 15: 10-
Yekuwedzera kuburitswa zuva: Gumiguru 2021, 10 (Chishanu) 15: 10-
Akazvarwa muAdachi-ku, Tokyo muna 1973.Akave ane tarenda kubva kusekondari uye aiperekedza kune bandoneon solo padanho rekupedzisira ra1991 remuimbi anozivikanwa Ranko Fujisawa. Kubva zvaakagadzira CD rake kutanga muna 1998, ave nemitambo mikuru pasango repasi paCarnegie Hall neBuenos Aires, Argentina.Anopfuura makumi maviri emaAlbum akagadzirwa neSony Music. "Urarame muTOKYO-20" yakaongororwa zvakanyanya kuArgentina, uye muna 2002, yakarumbidzwa neArgentine Musicians Association (AADI) uye neBuenos Aires City Music uye Culture Administration. Iyo 2003th inopenya albha "Tint" naTaeko Ohnuki yakaburitswa muna 2015!Yakagamuchirwa iyo Japan Rekodhi Mubairo "Yakanaka Album Mubairo".Pamusoro penyika yetango, iye akapinda muyakaunganidzwa album yaSony "mufananidzo" uye iratidziro yehupenyu "mufananidzo unorarama" kubva kekutanga.Ari kushingairira kunyora, kusanganisira Fuji TV anime "Mononoke" OP rwiyo "Last String Moon", iyo TBS nhevedzano "THE World Heritage" OP rwiyo "Kaze no Uta", uye bhaisikopo "Hupenyu hwaGuskou Budori" ( Yakapihwa naWarner Brothers, Tezuka Productions). (Production), "Muviri Fat Meter Tanita's Mushandi Wekudya" (Kadokawa movie), mutambo weNHK "Goen Hunter" soundtrack, nezvimwe.
Vakapedza kudzidza kubva kuTokyo College yeMimhanzi.Akadzidza tango violin pasi paHajime Kamino naFernando Suarez Pas.Mushure mekushanda naYuzo Nishito naOrquesta Tipica Pampa, anga achishanda senhengo huru yebandoneon player Ryota Komatsu unit.Akaumbawo choro unit "Trindage" semutambi weBrazilian folk instrument bandolim, uye akaita makonati pamwe nevanyori vakaita saJorginho do Pandeiro naMauricio Carrilho.
Akasangana nemabass maviri pazera re18 uye akapedza kudzidza Kunitachi College yeMimhanzi. Muna 1982, akatanga kutamba achinyanya kuimba mimhanzi. Kubva 1990, ave kutora chikamu mune akawanda marekodhi, CM, TV, mafirimu, uye zvimwe mimhanzi zvigadzirwa kuburikidza ne studio basa. Muna 1991, aive akazvipira zvakanyanya kumitambo yevatenzi tango Kiyoshi Shiga (Vn) uye Ranko Fujisawa (Vo). Kazhinji aienda kuAsia muma1990s uye aigamuchira hwema hwatenzi H. Cabalcos.Mushure mekushanda muboka rega rega reKiyoshi Shiga naKoji Kyotani, ave kutora chikamu muzvikamu zvese zveRyota Komatsu kubvira 2009. Yakagadzirwa Trio Celeste muna 2009.Ndichiri kutsvaga chakavanzika chetango.
Atsushi Suzuki (muridzi wepiano / munyori)
Vakapedza kudzidza kubva Kunitachi Koreji yeMimhanzi, Dhipatimendi rePiano, uye vakahwina mubairo weYatabe.Yomiuri rookie konzati kuoneka.Mushure mekupedza kudzidza, akatanga kunyora nemabasa ekuita muWarsaw, Munich, nezvimwe, kusanganisira nyika yese.Akasangana nemimhanzi yeBrazil achishanda sechiLatin cheboka piyano, uye parizvino anoridza semunhu anoridza piano anoongorora zvemimhanzi yeBrazil, zvinova zvisingawanzoitika muJapan.Semunyori, akashanda pamimhanzi yakawanda yekamuri, piano concertos, nziyo dzekutengesa, uye nziyo dzemusoro wezvirongwa zveredhiyo.
Oniki Mutsuki (gitare)
Akazvarwa muKanagawa Prefecture muna 1964.Akatanga mimhanzi zviitiko muchikoro chesekondari. Muna 1990, akaumba boka rake, Bondage Fruit, uye akaburitsa maalbum matanhatu kusanganisira rake razvino basa "Bondage muchero 6" (2005).Chibereko cheBondage chakakurumbira kwazvo mhiri kwemakungwa, kusanganisira kukokwa ku "Scandinavia Progressive Rock Festival" uye "Prog Fest '6" muSan Francisco.Ane tarenda gitare anoramba achichinja gitare rake mazuva ese.
Vakapedza kudzidza kubva Kunitachi Koreji yeMimhanzi, Dhipatimendi reA Instrumental Music.Drummer uye anoridza mhosho. Ari kushanda mumhando dzese dzakadai seBlitz philharmonic mhepo, Little Edo Wind Ensemble, Katsuo Miyazaki Boka, rake bhendi Bibbidi Bops, jazz, Latin, Kayokyoku, uye ndarira bhendi.Akadzidza madhiramu pasi peKiyoshi Hasegawa.
High miriwo.Akadzidza classical ballet kubva pamakore masere muNagoya, Aichi.Yakadzidza pasi paMichiko Matsumoto naAkihiko Fujita. Muna 8, akakokwa naArtistic Director V. Isaev weArts Ballet Theatre yeFlorida kuzoita mu "2011th International Young Dancers Festival" yakaitirwa kuMiami, Florida, zvichitevera kuoneka kweBallet Kubatana "Dombo Remabwe". Muna 8, nyeredzi mu "Polovtsian Dances" paAichi Triennale Memorial Triple Building performance.Gare gare, akasangana neArgentina tango ndokutendeukira kumutambi wedango. Akadzidza pasi paAxel Arakaki, 2013 Argentine Tango World Championship Stage Division Champion, Carolina Alberici, mumiriri weNagoya Argentine Tango Club, naEnrique Morales, mumiriri weTango Sol Nihonbashi. Muna 2017, akadzidza kunze kwenyika muBuenos Aires, Argentina kwenguva pfupi.Kunze kwekutora chikamu muArgentina Tango World Championship Pista chikamu naAdrian Coria, achanoridza panze kuPaza Dorrego nevatambi vemuno uye achiridza pamutambo we tango weiyo yakareba-yakasimbiswa tango cafe "El Grand Cafe Tortoni".Parizvino, ari kuwedzera mikana yekuratidzwa kwekuratidzira, kunyanya kuTango Salon muTokyo.Iye zvakare mudzidzisi we tango uyo anokodzera semudzidzisi anozivikanwa weJapan-Argentina Tango Federation (FJTA).
Accelerator Aragaki.Akazvarwa muAichi prefecture.Akatanga kutamba pazera remakore gumi nematatu pasi paamai vemutambi.Akafunda matambiro akasiyana siyana senge tango yeArgentina, hip hop, ballet, uye jazz kutamba, uye akaonekwa pamatanho mazhinji.Mushure mekupedza chikoro chesekondari uye kuita nyanzvi kutanga uye kushanda semutambi kupaki yemusoro kwemakore maviri, Argentina ichadzidza kunze kwenyika muBuenos Aires kwegore mutango. Akava wekupedzisira (wechi13) mu2 Argentine Tango World Championship uye akazopedzisira akunda iyo 1 World Champion.Mushure meizvozvo, akapinda mukushanya kwenyika kuJapan pamwe neFabio Hagel Orchestra muMin-On Concert Association's ruzha tango nhevedzano "Dramatic Tango".Munguva pfupi yapfuura, akawedzera zviitiko zvake kunyika dzeAsia neEurope.
Unogona kuona kubvunzana nemutambi Ryota Komatsu paYouTube.